यो निर्देशक समाज मैले विरासतबाट प्राप्त गरेको होइनः अध्यक्ष डिसि – Namaste Filmy
नेपाली चलचित्र निर्देशक समाजका नौ जना पदाधिकारीहरुले अध्यक्ष दिनेश डिसि प्रति असन्तुष्ट देखाउँदै सामुहिक रुपमा गत बैशाख १० गते नै राजिनामा पेश गर्नु भएको थियो । महासचिव ऋषी लामिछाने, प्रथम उपाध्यक्ष राजु केसी, सचिव श्याम भट्टराई, सहकोषाध्यक्ष गोपालचन्द्र लामिछाने, सदस्यहरु राजु गिरी, दुर्गा नेम्वाङ , गोकुल कुमार राई ,आर वी के शरद र महेश प्रसाद ढुङ्गेलले संयुक्त राजिनामा पेश गर्नु भएको मा सदस्यहरु आर वी के शरद र महेश प्रसाद ढुङ्गेलले राजीनामा फिर्ता लिनु भएको थियो । राजीनामा प्रकरण पश्चात निर्देशक समाज गम्भिर स्थितीमा पुग्ने र अध्यक्षले अविश्वासको सामना गर्नु पर्ने अनुमान गरिएता पनि गत १७ गते बुधवारका दिन कार्यसमितको पुर्नःगठन गर्दै अध्यक्ष डिसिले बढो सहज ढंगले समस्याको समाधान गर्नु भएको छ । निर्देशक समाजको विधान–२०५७ प्रावधान अनुसार अध्यक्ष डिसिद्धारा नव गठित कार्यसमितिमा निवर्तमान कोषाध्यक्ष सुमन दाहाल हाल रिक्त रहेको पद उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्षमा योगेश घिमिरे, सचिव डा. घनश्याम खतिवडा, सदस्यहरुमा सम्झना उप्रेती रौनियार, रक्षा सिंह राणा, राजु गिरी, दुर्गा नेवाङ्ग, गोकुल कुमार राई र अमोल शर्मा रहेका छन भने अन्य दुइ सदस्यहरु पछि मनोनय गरिने भएको छ । साविक कै पदाधिकारीहरुमा उपाध्यक्ष सुचित्रा श्रेष्ठ, महासचिव निलहरी काफ्ले, सहकोषाध्यक्ष शेखर खनाल, सदस्यमा आरवी खत्री शरद र महेश ढुङ्गेल रहनु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । समाजले श्रावण १६ गते साधारण सभा समेत गर्ने जानकारी पनि प्राप्त भउको छ । यसरी निर्देशक समाजमा आकस्मिक रुपमा देखा परेको संकट र अध्यक्ष प्रति लक्षित आरोपहरुको संर्दभमा अध्यक्ष डिसिसँग गरिएको कुराकानीको अंश ः
प्रश्न ः निर्देशक समाजका सात जना पदाधिकारीहरुले केहि दिन अगाडि तपाई प्रति अविश्वास देखाउँदै राजिनामा पेश गरेका थिए । त्यसको गाँठी कुरा के थियो बताइदिनुस न ?
उत्तर ः हो, निर्देशक समाजका नौ जना पदाधिकारीहरुले राजिनामा पेश गर्नु भएको थियो । दुइ जना वार्तामा आउनु भयो र फिर्ता पनि लिनु भयो । बाँकीहरुलाई पनि वार्ताका लागि बोलाइएको थियो । उहाँहरु आउनु भएन । हामीले निर्देशक समाजलाई पुर्न गठन गरेर समस्याको समाधान गरिसकेका छौं । अब त्यो झमेलाहरु रहेन । ल्किलिएर भइसकेको छ ।
प्रश्न ः समुहगत रुपमा नै पदाधिकारीहरुले राजिनामा दिनुमा तपाई माथी ठूलै प्रश्न उठाइएको हुनु पर्छ । खास प्रशंग के रहेको थियो ।
उत्तर ः मेरो ब्रम्हले देखेको कुरा त उहाँहरु कसैको भडकावमा पर्नु भयो । सत्य तथ्यगत विषयवस्तुहरुलाई उठान गरेर आउनु भएको भए त प्रक्रियागत रुपमा नै आएनु हुन्थ्यो । उहाँहरुले म माथि अविश्वासको प्रस्ताव नै ल्याउन सक्नु हुन्थ्यो । त्यसैले उहाँहरु कसैको उस्काहटमा कपोल्कपित विषयवस्तुहरुलाई लिएर भडकावका लागि मात्र राजिनामा दिनु भएको हो । त्यसको प्रमाणको रुपमा मैले निर्देशक समाजलाई सहज रुपमा नै पुर्नःगठन गर्दै समस्याको समाधान गर्न सक्नु हो । सत्य तथ्य नै यहि हो ।
प्रश्न ः राजिनामा दिने पदाधिकारीहरुले तपाईलाई स्पष्ट तिन आरोपहरु पहिलो आर्थिक हिनामिना, दोस्रो अमेरिकाबाट ल्याइएको क्यामेरा बेच्ने मनासाय रहेको र तेस्रो संस्थामा तपाईको एकल निर्णय भयो भन्ने थियो । यहि होइन तपाई माथी लगाइएका आरोपहरु ?
उत्तर ः अब हेर्नुस १ आर्थिक हैसियत बनाउन नसकेको संस्थाको मैले कताबाट रकम हिनामिना गर्नु । मेरो नेतृत्व पुर्व लगभग ३ लाख रुपैयाँ संस्थाको ऋण रहेको थियो । त्यो विस्तारै फर्छयाउने काम गरियो । संस्थालाई ऋण मुक्त पारियो । यो आरोप आफैमा हास्यास्पद छ । अर्को कुरा अमेरिकाबाट ल्याएको क्यामेरा मैले बेच्ने प्रयोजन राखे भन्ने छ, त्यो क्यामेरा फिर्ता पठाइएको छ । पोखरामा सम्पन्न वक्र्ससपको बारेमा एकल निर्णय गरेको हो भने यो समाजको पुर्व निर्णय अनुसार नै भएको हो । स्वयं संस्थाका सचिव ऋषि लामिछाने ज्यूले पदाधिकारीहरु र पत्रकारहरुको माझमा बसेर प्रेस मिट गर्दै दुइ हप्ता अगावै सार्वजनिक गरेको कुरा हो । यो कसरी एकल निर्णय भयो ? आरोप कै लागि मात्रै आरोप लगाएर पुग्छ ? बिना तुकका कुराहरुमा निर्देशक समाज जस्तो गरिमामय संस्था हाक्ने पदाधिकारीहरु आफै लाग्ने ? छलफल नै नगर्ने ? यी सबै बेफ्वाक्कका आरोपहरु हुन ।
प्रश्न ः तपाईलाई नायिका तथा निमात्री रेखा थापा र निर्देशक श्याम भट्टराई बिच चलचित्र “हिम्मत वाला”को विषयलाई लिएर बढेको मनमुटावको बारेमा कुनै चासो लिनु भएन भन्ने आरोप छ नी ?
उत्तर ः कसरी चासो नदिएको कुरा हुन्छ ? औपचारिक रुपमा ल्याउनु प¥यो नी समस्या र गुनासाहरु तब न जानकारी हुन्छ । त्यसको पनि प्रक्रिया छ । अध्ययन हुन्छ । वास्तविकता के हो पत्ता लाग्छ । रिर्पोट पेश हुनु प¥यो । हल्ला गरेर हिँडदैमा समस्या समाधान भइहाल्छ ? श्याम जी एक पल्ट कार्यालयमा आउनु भएको थियो । उहाँको कुराहरु पनि सुनेकै हो । रेखा थापा धनगढीबाट काठमाण्डौं आउनु भए पछि उहाँ सम्र्पकमा नै आउनु भएन । अनि कसरी हुन्छ समस्याको समाधान ?
प्रश्न ः निर्देशक श्याम जीले तपाईलाई कार्यालयमा नै आएर भेटी गुनासाहरु राखीसके पछि समाधानको लागि अगाडि बढ्नु÷बढाउनु त तपाईको जिम्मेवारी होइन र ?
उत्तर ः हेर्नुस् १ भन्नै पर्दा नेपाली चलचित्र क्षेत्रका ब्यक्तिहरुको ब्यवहार मिल्ने र बिग्रने बिचीत्रैको छ । १२ वर्ष अघि देखि पानी बाराबार भएकाहरु कुन बेला एकै थालमा खान थालिसकेको हुन्छ, कसैलाई पत्तो नै हुन्दैन । सँगै गाँठो कस्सेर उठवस गर्नेहरुको कहिले बोलचालै बन्द हुन्छ, त्यो पनि कसैलाई थाहा हुन्दैन । अब कुराकानी गरिसकेर श्याम जी औपचारिक रुपमा सम्पर्कमा नआउनु भए पछि, हुन सक्छ उहाँहरुले आफु बिच रहेको “मिस अन्डरस्ट्यान्डिङ्ग” मिलाउनु भयो होला, मेलमिलाप मै लाग्नु भयो होला भन्ने भयो । पिंडित त घच्चघचाउन मात्र भए पनि आउनु प¥यो नी । परेन र ?
प्रश्न ः यो त बलेकै आगो ताप्ने परिपाटी कै निरन्तरताका कारण न कुनै सुनुवाइ भयो न कारवाही नै भयो भनिन्छ नी ?
उत्तर ः दुबै पक्षको कुरा नै नसुनी कसरी अगाडि बढ्ने भनेको नी ? यसमा को दोषी थिए म भन्न सक्दिन । औपचारिक रुपमा नै अगाडि बढ्नु भएको भए त तत्कालै चलिरहेको सुटिङ् नै रोक्न सकिन्थ्यो की । त्यती गर्न सकिएन त चलचित्रको प्रर्दशन नै रोक्ने प्रक्रियामा जान सकिन्थ्यो की । त्यसको लागि केहि न केहि त गर्न सकिन्थ्यो नी । बाहिर मात्रै कुरा गर्ने कार्यालयमा नआउने । अनि कसरी हुन्छ ? अब यो च्याप्टर नै समाप्त भइसकेको छ । सकियो अब यो ।
प्रश्न ः तपाई माथी अर्को गम्भिर आरोप पनि लगाइएको छ । पोखराको वक्र्ससपमा ठूलै रकम हिनामिना गर्नु भयो रे नी ?
उत्तर ः अरुले ठूला ठूला कुरा गरेर हिड्छन । म त कामै गरेर देखाउने मान्छे हुँ । वक्र्ससपमा ४४ जना सहभागीहरु थिए । प्रत्येक सँग ७ हजारको दरले शुल्क उठाइएको थियो । पोखरामा एक हप्ता बस्न खान ७ हजारले पुग्छ ? यो वक्र्ससप आज सम्म नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विकासको लागि ठूलै उपलब्धिमुलक र प्रयोगात्मक थियो । अमेरिकन दुइ जना प्रशिक्षकहरु थिए । यो वक्र्ससपको लागि अमेरिका नै जाने हो भने “पर हेड” ८ लाखको हाराहारीमा खर्च हुन्छ । हामी वक्र्ससपकै लागि संलग्न हुनेहरु ७० जना लगभग थियौं । पोखराबाट कार्यक्रम सकाएर काठमाण्डौं आउन पाएको छैन, लौ हिनामिना भयो भन्ने हल्ला छ । समय थियो । हिसाब किताब निकाल्नै पथ्र्यो । निकालिन्थ्यो । चित्त बुझेन, छलफल गरिन्थ्यो । यो होनी प्रक्रिया त । चरित्र हत्या कै लागि आरोप लगाउने ? हिसाब किताब जहिले पनि हेर्न सकिन्छ । जो कसैले पनि हेर्न सक्छन । यो कुनै ठूलो कुरा नै थिएन नी ।
प्रश्न ः पदाधिकारीहरुले वक्र्ससप पोष्टपोण्ड गरौं भन्दा भन्दै तपाई एकल निर्णयमा मा नै लाग्नु भयो भन्ने पनि छ नी । केहि दिन पछाडी सार्दैमा के विग्रन्थ्यो र ?
उत्तर ः यो वक्र्ससप गर्ने निर्णय मेरो एकल होइन । पदाधिकारीहरु कै सल्लाह, सहमती र निर्णयमा भएको हो । सचिव ज्यू ( ऋषी लामिछाने)ले नै पत्रकार सम्मेलन मार्फत १५ दिन अगावै सार्वजनिक गरिसक्नु भएको थियो । अर्को कुरा हामीले कार्यक्रमका लागि गर्नु पर्ने तयारी अगाडि बढाइ सकेको थियौं । सहयोग लिनु पर्ने ठाउँहरुमा कुराकानी गरिसकेका थियौं । अमेरिकाबाट आउने दुइ प्रशिक्षकहरुका लागि टिकट खर्च सहित ५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसेको थियो । यस्तो परिस्थीतीमा कार्यक्रम रोक्नु भनेको त संस्थाको प्रतिष्ठालाई ख्याल नगरेको हुनजान्थ्यो । मेरो ब्यक्तिगत विश्वसनियता र इमान्दारीतामा समेत प्रश्न उठन सक्थ्यो । कार्यक्रम रोकेर भोलीका दिनहरुमा सहयोगका हातहरु कसरी अगाडि बढाउनु सकिन्थ्यो । मैले अहिले सम्म आर्जन गरेको इज्जत प्रतिष्ठता कहाँ पुग्थ्यो ? कसले विश्वास गथ्र्यो मलाई त्यस पछि ? भन्न लाई जे भने पनि हुन्छ ? त्यहि काम गरेर देखाउनु कति गाह्रो पर्छ ? मैले त समयमा नै वक्र्ससप गरेर संस्थाको प्रतिष्ठा झनै बढाउने काम गरेको छु भन्ने लाग्छ । मैले संस्थाको हाइट घटाउने काम त पक्कै पनि गरेको होइन नी ? प्रश्न ः अब आउँदा दिनहरुमा नेपाली चलिचत्र निर्देशक समाजलाई कसरी सन्तुलित रुपमा अगाडि बढाउनु हुन्छ ? के छ तपाईका भावी योजनाहरु ?
उत्तर ः यो निर्देशक समाज मैले विरासतबाट प्राप्त गरेको होइन । यो हामी सबैको साझा संस्था कै रुपमा रहने छ । नेपाली चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित खास गरी निर्देशकहरुको क्षमताको अभिवृद्धि गर्दै आइपर्ने समस्याहरु समाधान गर्ने सम्मको प्रयास गर्दै जाने हो । अन्य बृति विकासको क्षेत्रमा समेत के गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि पहल गर्ने नै छौं । छुटेका साथीहरु अर्को कार्यकालमा आउने नै छन । हामी सबै एउटै क्षेत्रका सहयात्रीहरु हौं । हामी यो वा त्यो भन्दैनौं । ब्यक्तिगत हितका लागि भन्दा पनि निर्देशक समाजका सदस्यहरुको हितमा लागि परिरहने नै छौं । केहि समय देखा परेको अन्यौलता समाप्त भएको छ । साथी भाइहरुको सल्लाह, सहयोग, आवश्यकता अनुसार निष्पक्ष र प्रभावकारी ढंगले सामुहिक हित र निर्णयमा विधान संम्बत ढंगले अघि बढ्ने हाम्रो संकल्प हो । हामी संस्थालाई सहि दिशा तर्फ लैजाने प्रयासमा अघि बढ्ने छौं । धन्यवाद
ठमेलमा अक्षयकुमार । दुई घण्टा जाम ।